Linux Mint inofunga kutimanikidza kushandisa patches | Linux Vakapindwa muropa
Pano uye mune chero midhiya nezve software isu tinowanzo kurudzira kugara uine iyo sisitimu yekushandisa mushe-kusvika-kudhara. Kana ichiita senge zano rakanaka kune mumwe munhu, anogona kusadzokorora mamwe mapurogiramu uye maraibhurari, asi zvigamba zvekuchengetedza zvinofanirwa kugara zvichishandiswa. Zvinotoshamisa kuti vashandisi vazhinji ve Linux mint havasi, saka Clement Lefebvre akataura mune yake Tsamba yemwedzi uno kuti vatore matanho, mamwe andisingafunge kuti munhu wese anofarira zvakaenzana.
Dambudziko harisi rekuti vashandisi vazhinji vanongo enda kubva pakushandisa zvimedu zvemazuvano. Dambudziko nderekuti, sekureva kwevanogadzira chirongwa, vazhinji vanoshandisa masisitimu evashandisi vari kushandisa shanduro dzisisiri kutsigirwa, nenjodzi iyo inogona kureva. Chikwata chaLefebvre chinofungawo kuti zvimwe zvine mhosva, nekuti havazive nzira yekuita kuti vashandisi vavandudze, saka vanogona kumanikidza vashandisi kuisa zvimwe zvigamba.
Ko Linux Mint inomanikidza iwe kukwidziridza senge Windows 10?
Ichokwadi chete ndechekuti ichi chinhu chiri kutaurwa, uye Lefebvre anoti iyo yekushandisa system "Tinogona kuomerera" kuti tiise dzimwe dzokororo. Kubva pane yangu maonero, izvi zvinogona kureva zvinhu zviviri: iyo yekuvandudza maneja inoratidza pop-up hwindo kana yambiro, zvakanyanya kana kushoma zvinosemesa, iyo inotikoka kuti tivandudze kana kugadzirisa kwatiri, izvo zvandiri kufunga kuti zvingave zviri nani kune vashoma vashoma ruzivo asi ini handifunge kuti epamberi anoda chero chinhu.
Iyo Linux Mint yemwedzi wetsamba haina kumira ipapo. Iye anotiudzawo nezvazvo tsikidzi dzinofanirwa kugadziriswa mumapurojekiti akaita xapp, warpinator, nemo, sinamoni-menus, nemo-dropbox, nemo-media-columns, uye nemo-python. Ivo vanotitaurirawo zvimwe zvekuvandudzwa muCinnamon, senge yakagadziridzwa memory memory.
Chero zvazvingaitika, chinonyanya kukosha inyaya yekuvandudzwa. Izvo zvinoramba zvichionekwa kuti vanozviita sei, asi kubva pano isu zvakare tinokuudza iwe: pazvishoma shandisa zvidziviriro zvekuchengetedza nekukurumidza iwe unogona, chero iyo sisitimu yekushandisa yauri kushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint vagadziri vanofunga kutimanikidza kuti tishandise zvigaro zvekuchengetedza mune yavo yazvino yemwedzi tsamba tsamba
Iwe haugone kumisikidza yakatarwa gadziriso nekuti iwe une yekugadzira system iyo iwe yaunoziva kuti inogona kukupa iwe matambudziko uye iwe kuinonotsa iyo kusvikira iyo bug yagadziriswa.
Asi chero ani asingagadzirise chero chinhu sekutonga haasi mushandisi wepamberi. Asi kupesana kwakazara.
Ipo vanhu vanofamba kuenda kuLinux [kazhinji] vane kakunyatso chengetedza chengetedzo… hapana kushaikwa kwekusaziva.
Kudanwa kwevagadziri veMint kunoita kunge kwakakodzera ... isu tichafanirwa kuona maitiro avanogadzirisa mhinduro.
Fedora inoronga kuendesa RHEL inovaka zvichibva pana Fedora Rawhide